Imetrobus | RayHaber | raillynews
Iindaba ze-BRT, iingozi ze-BRT, iimephu ze-BRT, iindlela ze-BRT, ukukhushulwa kwangoku kwe-BRT kunye nee-auction
I-IETT yenza uphuculo kwimigca efumana ezona zikhalazo zininzi ngomsebenzi owenziwe kwiingxelo zezikhalazo. Ngenxa yomsebenzi oqhelekileyo owenziweyo, kuye kwehla izikhalazo ze-8,6 yepesenti kunye ne-3 pesenti yokuhla kwezikhalazo ngokubanzi. Istanbul [More ...]
Igumbi leeNjineli zoomatshini ukulawula iiBhasi ze-IETT
I-IETT ityikitye isivumelwano kunye neChamber of Mechanin Mechaners ngaphakathi komgangatho wokuhlolwa nokulondolozwa kweebhasi zayo. Ke, iimpendulo kule mibuzo zinikezelwa liziko elizimeleyo ngaphandle kwabavavanyi be-IETT kunye neenkampani zokugcina. [More ...]
Imirhumo yokuThuthukiswa kwe-IETT iya kuphunyezwa ngomso ..! Nantsi iRhafu eNtsha
Imirhumo yokuThuthukiswa kwe-IETT iya kuphunyezwa ngomso ..! Nantsi iRhafu eNtsha; Imirhumo yokuhamba nge-IETT inyuswe ngeepesenti ezingama-35 e-Istanbul. Abafundi kunye nabafundi abagcweleyo kumaxabiso e-metrobus, adla ngokusetyenziswa xa usiya emsebenzini okanye esikolweni. [More ...]
Ukuhamba Hike kuchazwe nguImamoglu
Umongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu wavula i-CNR 7th Book Book Fair. Kwintetho yakhe yokuvula, wathi, "Kukho izinto ezithile ezizakusifikisa kwinqanaba lehlabathi. Umdla okhethekileyo kwincwadi okanye kwilizwe [More ...]
Ukuphehla uMbane okanye iBhasi yeHybrid emva kokuba kuthengwe iMetrobus eNtsha
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan (i-IMM) ufumana le metrobus, eyeyona nto ibalulekileyo kubomi be-Istanbulites, kwaye ingumxholo wento joke kunye neparodies ngenxa yobude nobude bomgca. I-IMM, ekhawuleze iprojekthi yokuvuselela izikhululo ngokuxinana okukhulu, [More ...]
Iingozi zeMetrobus zincitshisiwe ngoQeqeshi Onikezwe
U-Istanbul uMasipala oMbaxa wase-Istanbul uNobhala-Jikelele Wezothutho İbrahim Orhan Demir uthe izifundo zengqondo ziyenziwa kubo bonke abaqhubi ukuze kuncitshiswe iingozi ezikwibala le-metrobus. Iron. "7/24 [More ...]
Iiprojekthi zeMetrobus eNtsha kwi-TEM, iSithembiso se-Imamoglu
Kumgca we-metrobus, ohamba malunga nesigidi esinye sabagibeli phakathi kwamazwe amabini yonke imihla, izithuthi ziya kuhlaziywa ngeebhasi eziphakamileyo, ezikhululekileyo. IMarmaray isebenza ngakumbi ekufumaneni uxinano lomgca apho ulwandiso lwesikhululo lusebenza khona ngokukhawuleza. [More ...]
I-IMM evunyelweyo yokuHamba iiNdlela ..! Iirhafu ezintsha ziqala ngoMvulo
I-UKOME igqibe ekubeni yenze uhlengahlengiso lwamaxabiso amatsha ngenxa yokonyuka kweendleko kwiindleko zokuhamba zikawonkewonke ezingatshintshanga malunga neminyaka emi-3. Kwirhafu entsha eza kuqaliswa ngoMvulo, umhla we-10 kuFebruwari; itikiti elipheleleyo ele-elektroniki [More ...]
Isigqibo se-35% seHike senziwe e-Istanbul
I-Union of Chambers of Craftsmen and Artisans e-Istanbul ibhengeze ukuba kuthathwe isigqibo nge-35% e-Istanbul. Ukuhamba kulindeleke ukuba kusebenze emva kokutyikitywa kwabasemagunyeni abafanelekileyo. Unxibelelaniso loThutho kwiziko lokuLungelelaniswa kweNtlekele kuMasipala weNgingqi weIstanbul [More ...]
Inani leMetrobus Expeditions eyandisiweyo
I-BB inyuse inani leemoto kunye nohambo kumgca we-metrobus ngokuthelekiswa nobusika bokugqibela bonyaka ophelileyo. Umndilili wezithuthi ezingama-20 ezifika kwizikhululo ngexesha leeyure eziphezulu. Iibhasi ezitsha ezingama-300 zokutshintsha ezinye izithuthi ezindala [More ...]
Abahlali base-Istanbul baya kuba nakho ukusebenzisa ii-smartphones zabo njengekhadi le-Istanbul
Ngesicelo esitsha esiveliswe yi-Istanbul Metropolitan Municipality (İBB) inkampani esebenzisana neBELBİM A.Ş., abahlali base-Istanbul baya kuba nako ukungena kwizithuthi zikawonkewonke ngenkqubo ye-matrix yedatha kwiifowuni zabo. I-TUYAP ihlelwe yi-Mpuma yoKhenketho lwaseMeditera yeHlabathi kunye neNdlela yokuHamba (EMITT) [More ...]
Eyona ndawo yoxolo kakhulu eIstanbul Eyüpsultan Eyona ndawo ineMetrobus
Umbutho wezeMpilo yeNgqondo uhlolisise ukwabiwa kweemeko ezisekwe kwindawo yabantu kwisicelo 'se-CheckFeel', kwaye wenza imephu yeemvakalelo zeendawo eziseIstanbul. Ngesicelo esifikelela kubasebenzisi abangamawaka alishumi, iimvakalelo kwabelwane ngazo phantse kwiindawo ezili-10 lamawaka. Association [More ...]
I-Istanbul Metro Imephu yeMetro Route kunye neZitovu
IMetrobus sisithuthi sothutho sikawonkewonke esidityaniswe nokudityaniswa kwemetro kunye nebhasi. Isebenza kwimitya ebekelwe yona ngamavili erabha. Isisiseko sayo indlela yabucala, ke iyakhawuleza ukugcwala. [More ...]